ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: February 2012
သမျှ ၊ တစ်ချိူ့ လည်း ဖော်ဝါ့ ဒ်မေးကရတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပြလိုက်ပါတယ်...
ဘ၀မှာ မူယာ၊ မာယာတွေများနေဖို့ ၊ ပရိယာယ်တွေများနေဖို့ မလိုပါဘူး...
အရှိကိုအရှိအတိုင်း၊ ရိုးသားပွင့် လင်းစွာဆက်ဆံပြောဆိုနေထိုင်လိုက်ပါမိတ်ဆွေ...
(မိမိရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုက သူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်မနစ်နာဖို့ တော့ လိုသပေါ့ .....)
ခင်ရေ...ကိုယ်တော့ မင်းအပြင်တစ်ခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ဖေါက်ပြန်မိခဲ့ တယ်ကွာ...
ရှင့် လောက်တော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်...
ဘ၀မှာ လက်လမ်းမမှီဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်မကျ၊ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ လေ...
အိနြေ္ဒသိက္ခာနဲ့ နေယင် ဘယ်သူမှမစော်ကားရဲ၊ အထင်မသေးရဲဘူးပေါ့ ...
စကတ်တိုတိုဝတ်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုချက် ....
ကွန်ပြူတာကြည့် သူတွေလုပ်လေ့ လုပ်ထရှိတာက...
ဒီအမြှောက်လောက်တော့ တို့ မကြောက်လို့ များဆိုလိုသလားပဲ...
ဆန်းပါပေ့ သူ့ နားဆွဲ...
လင်နဲ့ မယား ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါတဲ့ ...
ရွေးကောက်ပွဲလည်းပြီးရော...အားလုံးကို " ဒါ " ပဲထင်တယ်ဆိုတဲ့ အချိူးမျိူးတွေပေးတတ်
ဖဲဝါသနာရှင်များအတွက် အပေါ့ သွားကြွေခွက်...
လျှောက်ရောင်းယင်းပင်ပန်းမယ်ဆို ခဏနားပြီးအိပ်စက်အပန်းဖြေလို့ ရမယ်...
နင် ခြေထောက် ၂ ချောင်းပေါ် ရပ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ နင့် ရဲ့ သာယာတဲ့ ဘ၀လေးတော့ 
ဇတ်သိမ်းပြီဆိုတာမှတ်ပေတော့ ...ကျောင်းသွားရတော့ မယ်...စာတွေကျက်ရမယ်...
အလုပ်တွေဝိုင်းကူလုပ်ရတော့ မယ်...ငါဘာဖြစ်လို့ ခြေလေးချောင်းနဲ့ ပဲသွားနေ
တာ သိလား...အဲဒီလိုဒုက္ခတွေကြုံမှာဆိုးလို့ ကွဲ့ ကောင်လေးရဲ့ ...
Posted by Unknown | at 9:09 AM |2comments
နီပေါနိုင်ငံမှ အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိူး
သားကြီး ချန်ဒရာဘဟာဒူးဒန်ဂီ ကမ္ဘာ့ အရပ်
အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ်ရှိ နီပေါနိုင်ငံမှ ချန်ဒရာဘဟာဒူးဒန်ဂီ အမည်ရှိ အမျိူးသားကြီးဟာ အ
ရပ်အမြင့် ၂၁.၅ လက်မ ဖြင့် ကမ္ဘာ့ အရပ်အပုဆုံးလူသားအဖြစ်စံချိန်သစ်တင်ကာ ဂီးနက်စ်မှတ်
တမ်းအဖွဲ့ ရဲ့တရားဝင်အတည်ပြုခြင်းခံလိုက်ရပါပြီ....
သူ့ ရဲ့ အရပ်ဟာ သတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့ အရှည်ထက်တောင်မှ ပိုပြီးတိုနေပါသေးတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ ကတော့ ဂီးနက်စ်မှတ်တမ်းစံချိန်အဖွဲ့ မှ ၎င်းအား ကမ္ဘာ့ မှတ်တမ်း
တင်ခဲ့ သမျှထဲတွင် လက်ရှိအသက်ရှင်လျှက်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ အရပ်အပုဆုံးအမျိူးသားဘွဲ့ အပြင် မှတ်
တမ်းတင်ခဲ့ သမျှ ( ဂီးနက်စ် မှတ်တမ်းအဖွဲ့ ၏ ၅၇ နှစ်တာသမိုင်းတစ်လျှောက် ) အရပ်အပုဆုံး
လူသား ဘွဲ့ ကိုအသိအမှတ်ပြု ပေးအပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အပုဆုံးလူသားအဖြစ် တရားဝင်အရပ်တိုင်းပွဲ...
How low? A nurse crouches to the left and an official to the right as Chandra measures up... at just 22 inches tall
အခုမှပဲ အဘ ဆန္ဒတွေပြည့် ဝရတော့ တယ်...
အရပ်အမြင့် ၂၁.၅ လက်မနဲ့ အသက်ရှင်လျှက်အရပ်အပုဆုံးအမျိူးသားဘွဲ့ နဲ့ 
ကမ္ဘာ့ အရပ်အပုဆုံးလူသားဘွဲ့ တို့ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ ပြီ...
မိသားစုဝင် တွေနဲ့ အတူ...
ဘကြီး...ဘကြီးရဲ့ ဦးထုပ် စောင်းနေတယ်...ကျွန်တော်ပြင်ပေးမယ်...
တူတော်မောင် ဒိုလက်ခ်ဒန်ဂီနဲ့ အတူ...အရပ်တိုင်းဖို့ အသွား...
Chandra has his hat adjusted as he walks with his far taller nephew Dolakh Dangi on the way to the hospital before being measured
ကမ္ဘာ့ အပုဆုံးလူသားဘွဲ့ ရခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့ နံပြားနဲ့ ကြက်သားဟင်းစားမယ်...
Big appetite: Chandra tucks intoameal of curry and naan bread to celebrate being crowned the world's smallest man
စားပွဲပေါ်တက်ထိုင်ပြီးစားမှ ဟင်းခွက်တွေကို နှိုက်လို့ မှီမှာပေါ့ ...
Chairs are no uses to Chandra... he scampers across the table to reach the dishes
အဘချန်ဒရာဘဟာဒူးဒန်ဂီဟာ နီပေါနိုင်ငံမြို့ တော် ခတ္တမန္ဒူ မြို့ အနောက်တောင်ဖက်
ကီလိုမီတာ ၅၄၀ လောက်ကွာသည့် ဒန်း ခရိုင်ဒေသမှ ရီးမ်ခိုလီ ရွာကလေးက
နေအိမ်ကလေးမှနေပြီး လမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်...
In the spotlight: Chandra Bahadur Dangi,who has broken the record as the world's smallest man today, goes forastroll near his home in Reemkholi village in Dang district, some 540 kilometres southwest of Kathmandu
မင်းတို့ သတင်းစာကလည်း ငါ့ ထက်တောင်ကြီးနေပါ့ လားကွာ...
တက်ရဆင်းရတာတော့ တယ်မသက်သာဘူးဟေ့ ...
အခုမှပဲ တရားဝင်တိုင်းတာနိုင်တော့ တယ်...( အရပ်များပြောပါတယ်...)
Chandra Bahadur Dangi's claims to be the world's shortest man were made official by Guinness World Record experts today
ထူးဆန်းမှတ်တမ်း...ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ များတွေ့ ရသေးတယ်ဗျာ...
Dangi left his tiny village for the capital of Nepal, Kathmandu, to meet Guinness World Records experts
အသက် ၇၂ မို့ လူကြီးလက်မှတ်ဝယ်ရတယ်...
ပေါင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်လို့ မရဘူးတဲ့ ဗျာ...မတန်ဘူး..
Flying high: Chandra Bahadur Dangi prepares for landing in Kathmandu where he discovered he is in fact the world's smallest man
ဒီသတင်းကတော့ တရားဝင်အတည်မပြုရသေးခင် တင်ခဲ့ တဲ့ သူ့ အကြောင်းပါပဲ...
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2106281/Worlds-shortest-man-Chandra-Bahadur-Dang-confirmed-Guinness-World-Record-holder.html#ixzz1nXy2oGjs
Posted by Unknown | at 7:22 PM |0comments
အလေးချိန် ၁၅.၅၂ ပေါင် ( ၁၇.၀၄ ကီလို ) ရှိ သားယောကျာင်္းလေး တစ်ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံ အ
လယ်ပိုင်းဒေသတွင် မွေးဖွားခဲ့ ပါတယ်....
လွန်ခဲ့ သည့် စနေနေ့ ကမွေးဖွားခဲ့ သည့် ကလေးငယ်လေး ချွန်းချွန်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်
အလေးချိန်အများဆုံး ( အထွားဆုံး ) မွေးကင်းစကလေးငယ်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်သွားပြီဖြစ်
မိခင်ရော ကလေးပါ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟီနန်ပြည်နယ်၊ ရှင်းရှန်း မြို့ ဒေသခံဆေးရုံတွင် ကျန်းမာစွာ
မွေးမွေးချင်း ၁၅ ပေါင်ခွဲရှိလို့ တစ်တုံးတစ်ခဲကြီးပါပဲ....
Bonny baby: Chun Chun was born health weighing 15.52lbs in Xinxiang city, Henan province on Saturday
နှစ်ယောက်စလုံးပင်ပန်းခဲ့ ကြလို့ ....
ကလေးငယ်မွေးဖွားခဲ့ သည့် အချိန်မှာလည်း တရုတ်ရိုးရာ မင်္ဂလာရှိသည်ဟုယူဆကြသည့် ယခု
နဂါးနှစ်အစပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်မို့ ကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ခညောင်းသည့် အချိန်လို့ ဆိုရ
" ကျွန်တော့် ဇနီးကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်တုံးကတော့ တစ်ခြားကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိူးသမီးတွေ
နဲ့ အတူတူပါပဲ....ပုံမှန်ပဲ စားသောက်တာပါပဲ...ဒါပေမယ့် မွေးလာတော့ တစ်ကယ့် နည်းတဲ့ က
ဒီနေ့ ဟာလည်းတရုတ်ရိုးရာပြက္ခဒိန်အရ နွေဦးရာသီရဲ့ ပထမဦးဆုံးနေ့ ဖြစ်ပြီး သူဟာ နဂါးနှစ်
မှာမွေးတဲ့ ကလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်...ကျွန်တော်ကတော့ အလွန်ပဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါတယ်.."
လို့ ပြုံးပျော်ကြည်နူးနေသည့် ဖခင်ဖြစ်သူ ကျင်ဂန်း ကဒေသခံ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း ရှင်းရှန်း
ကို ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ မိခင်ဖြစ်သူ ၀မ်ယူကျွမ်း ကတော့ သူမအနေနှင့် ကလေးငယ်ဟာ တစ်
စုံတစ်ခုတော့ ထူးဆန်းနေပြီဆိုတာ ခံစားသိရှိနေခဲ့ ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
ဖခင်ဖြစ်သူအတွက်တော့ အနှိုင်းမဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ပါးပါပဲ...
သူ့ အမေကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး
စားတာသောက်တာ ပုံမှန်ပါပဲ လို့ ဆိုနေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ...
"သားလေးကို ကိုယ်ဝန်စရှိကတည်းကအယင်သမီးလေးကို ကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့ စဉ်တုံးကနဲ့ မတူပဲသွား
ရလာရတာ အထူးပဲ လေးလံလှတယ်ဆိုတာခံစားခဲ့ ရပါတယ်... ကျွန်မဗိုက်ကလည်းတော်တော်ကြီးကို ပူနေခဲ့ တာပါပဲ... ကလေးကတော့အလေးချိန် ၄.၅ နဲ့ 
၅ ကီလို ကြားရှိလိမ့် မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားခဲ့ တာပါ...ဒါပေမယ့် အခုလို ၇ ကီလိုအထိတော့ ရှိ
လိမ့် မယ်လို့ လုံးဝ မမျှော်လင့် ခဲ့ ပါဘူး..." လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ၏ အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ်ရှိ သမီးလေးမွေးဖွားခဲ့ စဉ်က ကိုယ်အလေးချိန်
၄ ကီလို ( ၈ ပေါင် ) သာရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
" ကလေးငယ်ဟာ သာမန်ကလေးတစ်ယောက်ထက် နှစ်ဆပိုကြီးနေတာပါ..." လို့သားဖွားမီး
ယပ်ဌာနအကြီးအကဲ ရှန်းလီလီက ရှင်းရှန်းတီဗီလိုင်း ကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၇ ကီလိုရှိသော က
လေး ၃ ဦးမွေးဖွားခဲ့ လို့ နိုင်ငံရဲ့ အ၀ဆုံးမွေးကင်းစကလေးများအဖြစ် ပူးတွဲစံချိန်တင်ခဲ့ ကြပါ
ယခု ကလေးငယ် ချွန်းချွန်း ကတော့၇.၀၄ ကီလိုနဲ့ ယခင်စံချိန်ဟောင်းများကို ကျော်နိုင်ခဲ့ တာ
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ သမျှထဲက အ၀ဆုံး၊ ကိုယ်အလေးချိန်အများဆုံးကလေးကတော့ ၁၀.၈ ကီလို
ရှိသည့် ၁၈၇၉ ခုနှစ်တွင် အိုဟိုင်ယို ပြည်နယ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ သည့် ကလေးဖြစ်တယ်လို့ ဂင်းနက်
ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ရဲ့ အဆိုအရသိရပါတယ်...
ထိုကလေးငယ်ကတော့ ဖွားမြင်ပြီးမကြာခင်သေဆုံးသွားခဲ့ ပါတယ်...
Posted by Unknown | at 9:03 AM |0comments
သူတို့ တွေလည်း လူကောင်သေးလို့ ဆိုပြီး အားငယ်မနေပဲ ဘ၀ကိုစိတ်ဓါတ်ဇွဲမာန်အပြည့် နဲ့ 
သြော်...သမုဒ္ဒရာ၊ ၀မ်းတစ်ထွာအတွက် အမျိူးမျိူးအဖုံဖုံ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရတာ
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရိုင်းပင်းကူညီလို့ ....
နွားရိုင်းသတ်ကွင်းထဲဝင်ဖို့ အသင့် ရှိနေကြပြီ....
အောင်နိုင်သူရဲ့ အပြုံးနဲ့ ....
အားပေးသူများရဲ့ မေတ္တာကို ခံယူနိုင်သူတွေရှိသလို....
နွားရိုင်းကို ခေါ်ယူညှို့ ငင်ဖို့ ....
ဟိုးယခင်က ခေတ်စားခဲ့ ဖူးတဲ့ မင်းအသက်ငါ့ ပေးဆရာကြီးမြခိုင်
ကက်ဆက်ဇတ်လမ်းခွေထဲကလို ဆရာကြီးအထာနဲ့ ...
လူနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နွားအငယ်စားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရသော်လည်း....
တိရိစ္ဆာန်ဟာ တိရိစ္ဆာန်မို့ ....
Posted by Unknown | at 10:36 PM | 1 comments
Labels: news:photos:general knowledge
Zimbabwean man tells court his shrinking penis is too small to commit rape
အဟုတ်တကယ်ပြောရယင်ဖြင့် ...ကျူပ်တကယ် small တာပါဗျာ...
မုဒိန်းမှုဖြင့် စွဲချက်အတင်ခံထားရသည့် အမျိူးသားတစ်ဦးက ၎င်း၏ဖွားဖက်တော်၊ လိင်အင်္ဂါဟာ
စံချိန်မမှီ၊ သေးငယ်လွန်းလှတာကြောင့် ထိုပြစ်မှုအား ကျူးလွန်နိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းထွက်
ဆိုခဲ့ ခြင်းအားမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှ ဘူလာဝါယို တရားရုံးမှတရား
ခွင်အားလာရောက်ကြည့် ရှုနားထောင်သူများကိုထွက်ခွာသွားစေခဲ့ ကာရှင်းလင်းခဲ့ ရပါတယ်...
ဇီးပင်အရပ်ဒေသရှိ ဒင်ဂူမူဇီ မြို့ ကလေးမှ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ဂျိူအယ်နဒီဘီလ် အား လွန်ခဲ့
သည့် နှစ် သြဂုတ်လတွင် ထောင်မှလွတ်မြောက်ပြီးမကြာမီ ရည်းစားဟောင်းအား အဓမ္မပြုကျင့်
မှုဖြင့် စွပ်စွဲခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်....
သို့ သော်လည်း ၎င်း၏ အမျိူးသားရေးလက္ခဏာဖြစ်သော လိင်အင်္ဂါဟာ တဖြည်းဖြည်း သေး
ငယ်၊ရှုံ့ ဝင်နေတာမို့ ပြစ်မှုမြောက်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအလျင်းမရှိသောကြောင့်
ထိုပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့ သည်ဟုဆိုခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထိုအမျိူးသားက တရားသူကြီးမင်း
အိုဝင်တဂူး ကိုပြောဆိုလျှောက်ထားခဲ့ ခြင်းကြောင့် ရုံးတော်အပြည့် လာရောက်ကြည့် ရှုနား
ထောင်နေသူအပေါင်း အံ့ အားသင့် သွားခဲ့ ကြရပါတယ်....
လွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာကတည်းက ထောင်ကျနေခဲ့ သည့် နဒီဘီလ် ဟာ လွန်ခဲ့ 
သည့် နှစ် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့ တွင် ၎င်း၏ရည်းစားထံသို့ အလည်အပါတ်သွားရောက်ရန် ဆုံး
ဖြတ်ခဲ့ တယ်လို့ တရားလိုအစိုးရရှေ့ နေများကဆိုပါတယ်...
သူမအနေဖြင့် တစ်ခြားအမျိူးသားတစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ ပြီမို့ ရှေ့ ဆက်ပြီး ဆက်ဆံရေးမဖြစ်
နိုင်တော့ ကြောင်း အမျိူးသမီးကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအခါ နဒီဘီလ် ကအမျိူးသမီးအား ထိုကိစ္စကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ၎င်း၏နေအိမ်သို့ ဖိတ်
ခေါ်ခဲ့ ပြီး သူမကငြင်းဆန်သောအခါ သူမနှင့် သူမရဲ့ ခင်ပွန်းကိုပါ သတ်ဖြတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်း
အမျိူးသမီးအနေဖြင့် စိတ်မပါပဲ ၎င်းနောက်သို့ လိုက်ပါခဲ့ ရပြီး ၎င်း၏နေအိမ်တွင်သူမအား တစ်
ညတာ ပြန်မလွှတ်ပဲထားခဲ့ ပါတယ်...
နောက်တစ်နေ့ နံနက်ပြန်မလွှတ်ပေးချိန်အထိ နဒီဘီလ် ကသူမအား ၂ ကြိမ်တိုင် အဓမ္မပြုကျင့် 
ခဲ့ တယ်လို့ တရားရုံးတွင် ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ ပါတယ်...
အမျိူးသမီးအနေဖြင့် အိမ်သူပြန်သွားခဲ့ ပြီး ထိုကိစ္စကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားလည်းမပြောပြ၊ ရဲတပ်
ဖွဲ့ အားလည်း တိုင်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ ပါဘူး...
သို့ သော်လည်း လွန်ခဲ့ သည့် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ တွင် နဒီဘီလ် အားပုလင်းလွတ်တစ်လုံး
ကိုင်ကာ သူမနောက်သို့ လိုက်လာသည်ကိုတွေ့ ရှိရသဖြင့် အနီးအနားရှိအိမ်တစ်လုံးအတွင်းသို့ 
ပြေးဝင်ခဲ့ ရာကံအားလျော်စွာပင် ထိုအိမ်တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးနေထိုင်လျှက်ရှိသဖြင့် သူမအား
အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ မှုအား တိုင်ကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း နဒီဘီလ်က ၎င်းအနေဖြင့်အမျိူးသားရေးလက္ခဏာများ လျော့ နည်းကျဆင်းနေ
ခဲ့ သည်မှာ ကြာမြင့် ခဲ့ ပြီမို့ ထိုကဲ့ သို့ အဓမ္မပြုကျင့် မှုမှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ သ
ဖြင့် တရားရုံးတစ်ခုလုံး အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်...
၎င်းအားစစ်ဆေးခဲ့ သည့် အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းကလည်း ထိုသူ၏လိင်အင်္ဂါမှာ အရွယ်အစား
အလွန်သေးငယ်လှသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း တရားသူကြီးမင်းအား ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
တရားလိုအစိုးရရှေ့ နေ ဂျဘူလာနီ မဟ်လန်ဂါ ကတော့ ထိုကိစ္စအား ဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်း
ကျင်သူများဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ရန်အချိန်ပေးပါရန် တရားရုံးတော်အားတောင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်...
တောင်းဆိုချက်အား တရားသူကြီးမင်းမှခွင့် ပြုခဲ့ ပြီး နဒီဘီလ် အား ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ 
အထိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
A Bulawayo courtroom had to be cleared so that prison wardens could examineaman charged with rape after he claimed that his male member was so small there was no way he could have committed the crime. Joel Ndebele, 34, of Dingumuzi Township in Plumtree was accused of raping his ex-girlfriend in August last year soon after being released from prison. But he stunnedapacked courtroom last week when he told regional magistrate, Owen Tagu that he could not have committed the crime because his penis was shrinking and had become so short it was impossible to have penetrative intercourse.
The woman then reluctantly followed him to his house where she was detained overnight. The court heard that Ndebele raped her twice before releasing her in the morning. The woman returned home but did not tell her husband about the attack or report the matter to the police. However, on August 30 she allegedly saw Ndebele following her with an empty bottle and ran intoanearby house where one of the occupants happened to beapolice officer and reported the rape.
But Ndebele shocked the packed courtroom when he said there was no way he could have raped her because his penis had long been shrinking, leaving him ill-equipped to commit the alleged crime. The prison wardens who examined him told the magistrate that his male member was indeed small. Prosecutor Jabulani Mhlanga then asked the court for time have Ndebele examined by medical experts. The magistrate allowed the request and remanded Ndebele in custody until February 23.
Posted by Unknown | at 6:13 AM |0comments
Labels: news: newzinbabwe.com
ဖေ့ စ်ဘွတ်မှာဖွမိလို့ ...
လူမှုကွန်ယက်အင်တာနက်စာမျက်နှာ ဖေ့ စ်ဘွတ်တွင် အမျိူးသမီးတစ်ဦးအား ပြည့် တန်ဆာ
အဖြစ်ခေါ်ခဲ့ သဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တစ်ဦးအား ကြိမ်ဒါဏ်နှစ်ချက် အပြစ်ပေး
မည်ဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးတစ်ခု ကစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်...
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိလူငယ်ဟာ အာဖရိကတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွင် လူမှု
ကွန်ယက်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင် ယခုကဲ့ သို့ မှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့ ခြင်းကြောင့် ပထမဦး
ဆုံးအပြစ်ပေးခံရသူ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ကျေးလက်ဒေသရှိ မြို့ ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သော ချီရက်ဒ်ဇီ မြို့ မှ လူငယ်လေးက ၎င်းအနေဖြင့် 
ထိုအမျိူးသမီး၏ခွင့် ပြုချက်မရှိပဲ သူမ၏၇ုံးတွင် ဖုံးဖြင့် စကားပြောနေပုံအား ၎င်း၏လက်ကိုင်ဖုံး
ဖြင့် ရိုက်ကူးခဲ့ ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ ပါတယ်...
သဘောမတူပဲ ဖုံးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး လျှောက်မတင်လေနဲ့ မောင်ရင်တို့ ...
ဖေ့ စ်ဘွတ်ကနေ ဖွဘွတ် ဖြစ်သွားယင် မလွယ်ဘူး...
၎င်းနောက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ တွင် ထိုဓါတ်ပုံအား ချီရက်ဇီမှ ပြည့် တန်ဆာ တစ်ဦးဖြစ်
ကြောင်းဒေသခံရှိုနာ ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားဖေါ်ပြကာအွန်လိုင်းတွင် တင်ခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းတို့ နှစ်ဦးဟာ အွန်လိုင်းဖေ့ ဘွတ်လူမှုကွန်ယက်မိတ်ဆွေများ ဖြစ်သည့် အတွက် သူမ၏
ဓါတ်ပုံအားမြင်တွေ့ သွားခဲ့ ပြီးနောက် အမျိူးသမီးဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ အားဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ 
လို့ လူငယ်အား ဖမ်းဆီးခဲ့ ပါတယ်...
ယခုအခါ ၎င်း၏ဖေ့ စ်ဘွတ်စာမျက်နှာအား ဖျက်သိမ်းခဲ့ လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်...
ပြစ်ဒါဏ်မှလျော့ ပေါ့ စေရန် တောင်းပန်လျှောက်ထားရာတွင် ၎င်းအနေဖြင့် လူမှုကွန်ယက်စာ
မျက်နှာများနှင့် အကျွမ်းတ၀င်မရှိလှပါကြောင်း၊ မိဘမဲ့ ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းမှီခိုနေထိုင်ရာ
မိသားစုတွင် အဓိက၀င်ငွေရှာပေးနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ သည်ဟု ရေဒီယို
ဗော့ ပ် ဇင်ဘာဘွေ အသံလွှင့် ဌာနမှ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သို့ သော်ငြားလည်း လူငယ်လေးအနေဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းတရားသူကြီး တီနာရှီ နဒို
ကီ၇ာက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပြီး ကြိမ်ဒါဏ်နှစ်ချက်ပေးစေရန် အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်...
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်လူငယ်များအား ကြိမ်ဖြင့် ရိုက်ကာအပြစ်ပေးခြင်း
အား တရားဝင်ခွင့် ပြုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်...
သည်မြို့ ကလေးမှာဖြစ်ခဲ့ တာ...
လူငယ်များအား စည်းကမ်းလိုက်နာစေရန်အတွက် တရားဥပဒေစီရင်ထုံးများတွင်မက အိမ်များ၊
ကျောင်းများတွင်လည်း ကြိမ်ဖြင့် ရိုက်ကာ ဆုံးမခြင်းအား ကျင့် သုံးလျှက်ရှိနေပါသေးတယ်...
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့် ထုံးဥပဒေ ၃၅၃ တွင် သင့် တင့် လျှောက်ပါတ်သည့် ကြိမ်ဒါဏ်ပေးခြင်းအား
၆ ချက်ထက်မပိုစေပဲ အများပြည်သူမမြင်ကွယ်ရာနေရာတွင် တရားရုံးမှ သတ်မှတ်သည့် တာ
၀န်ရှိသူတစ်ဦးက ပြုလုပ်စီရင်နိုင်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါတယ်...
ထိုလူငယ်အနေဖြင့် ပြစ်ဒါဏ်ခံနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိကြောင်း ဆရာဝန်တစ်ဦးမှ
ထောက်ခံအတည်ပြုပေးရမည်ဖြစ်ပြီး မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူတစ်ဦးလည်း ပြစ်ဒါဏ်စီရင်ရာသို့ တက်
ဖေ့ စ်ဘွတ်သုံးလို့ ဒုက္ခရောက်ရတာတွေမနည်းဘူးနော်...
Posted by Unknown | at 9:57 AM |2comments